Lauchpad : A place to translate Ubuntu into Our Language officialy. — MYSTERY ZILLION
မူလ › Linux/Unix › Ubuntu
Lauchpad : A place to translate Ubuntu into Our Language officialy.
July 2011 edited July 2011 in Ubuntu
ကျွန်တော် U4MM ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ Ubuntu Free Class မှာ ပေးခဲ့တဲ့ Presentation ကို ပြန်လည်းရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
A place to translate Ubuntu into Our Language officialy.
Ubuntu Operating System စထွက်လာကတည်းက Ubuntu Operating System ကို နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကားနဲ့ သုံးနိုင်ရမည်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးပါခဲ့ပါတယ်။ Ubuntu မှာပါတဲ့ Source Code တွေအကုန်လုံးကို Canonical ရဲ့ launchpad.net မှာတင်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တော်များများလည်း ubuntu ကို ကိုုယ့် ဘာသာစကားနဲ့ သုံးနေကြပါပြီ။ အဲဒီတော့ ဒီ Ubuntu ကို မြန်မာ လို ဘာသာပြန်ချင်ပါက ဘယ်လိိုမျိုးဘာသာပြန်ရလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ၊ စသည်ဖြင့် ဒီ ဆောင်းပါးထဲမှာတင်ပြပေးမှာပါ။ Ubuntu ကိုထုတ်တဲ့ Company (Canonical) မှ တရားဝင်ဘာသာပြန်နိုင်ကြောင်းကြေငြာထားပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဆိုရင် Operating System တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပြီး မြန်မာဘာသာသို့ဘာသာပြန်ရာတွင် တစ်ချို့ စကားလုံးတွေမှ အပ ကျန်သည့်စကားလုံးများသည် သိပ်အခက်အခဲမရှီပါ။
Launchpad ရဲ့ Web Site Address ကတော့ http://launchpad.net ဖြစ်ပါတယ်။
What is in Launchpad?
Wikipedia မှာတော့ Launchpad အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။
Luachpad ကိုတော့ Canonical က ဦးစီးပြီး မိမိဘာသာနဲ့ မိမိသုံးချင်ပါက lauchpad ထဲဝင်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်။ Launchpad က ဘာသာပြန်ဆိုဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်
ပါဘူး။ 2004, January ကစခဲ့တဲ့ Launchpad ထဲမှာ တခြားသော Components များလည်းပါပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
Answers, Bugs, Blueprints,Code,Translation စသည်ဖြင့်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီထဲက Translations အကြောင်းကို အဓိက အားဖြင့်ပြောမှာပါ။
Who translates ubuntu?
Volunteers ပေါင်းမြောက်များစွာက သူတို့ဘာသာစကားမှာ သုံးလို့ရအောင်လို့ဘာသာပြန်နေကြပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ Ubuntu ကိုသုံးချင်ပါသလား?? သင်လည်း ဝင်ရောက်ကူညီလို့ရပါတယ်။
ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ Ubuntu ကို ဘာသာပြန်ဖို့က
၁။ အင်တာနက် --သူက Web ပေါ်မှာပဲပေးထားတာမို့လို့ အင်တာနက် ရှိမှ ဘာသာပြန်လို့ရမှာပါ။
၂။Email—Launchpad က ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် Email အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။
၃။ Language Knowledge-- ကတော့ ဒီစကားစုလေးကို ဘယ်လိုလေးရေးလိုက်ရင်လှမလဲ။ဖတ်
လို့ ကောင်းအောင် ဘယ်လိုရေးမလဲ။ စသည်ဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ Spare Time-- ကတော့ ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပိုလေးတစ်ခုပါ။ ပထမတစ်ရက်မှာ ၁ မိနစ်ပေးမယ်။ ၁ မိနစ်ထဲမှာ စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်း ဘာသာပြန်လိုက်မယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ၂ မိနစ်ပေးမယ်။ အဲဒီ ၂ မိနစ်ထဲမှာ နှစ်ကြောင်းပြီးအောင် ပြန်မယ်။ အဲဒီလိုမျိုလေးအချိန်ပေးလိုက်
ရင် Ubuntu MY ဆိုတာ သိပ်မကြာပါဘူး ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ Be Collaboratives—ဒါကတော့ launchpad ထဲက Member အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွှတ်မူပါ
ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင် သင် Ubuntu ကို သင့်ဘာသာစကားနဲ့ ပြန်လို့ရပါပြီ။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Launchpad.net မှာ ဝင်ရောက်ပြီး register လုပ်ရပါမည်။ Launchpad Registration သည် Open ID ကိုသုံးထားသောကြောင့် တခြား Canonical လက်အောက်မှာရှိသည့် ဆိုဒ်များထဲသို့ ၀င်ရောက်ပါကလည်း ဒီဆိုဒ်မှာသုံးခဲ့သည့် Email ၊ Password များအတိုင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Registration ပြီးပါက Launchpad ထဲမှာ မိမိ ပြန်ချင်သော ဘာသာစကားအကြောင်းကိုပြောပေးရပါ
ကျွန်တော်တို့ ပြန်ရမှာကတော့ Burmese Language ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဖို့ အောက်ပါ လင့်(Links ) လေးကိုဝင်လိုက်ရအောင်
https://translations.launchpad.net/ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိမိ ပြန်မယ့် ဘာသာစကားရွေးပြိးပါက Ubuntu Version ကိုရွေးပေးရပါမယ်။
ဗားရှင်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာကွာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းရှီပါတယ်။ ဘာမှသိပ်မကွာပါဘူး။ အသစ်ထွက်လာမယ့် Version ထဲမှာ စကားလုံးအသစ်ပါပါက အဲဒီစကားလုံးအသစ်တွေကို ထပ် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အခုပြန်မှာကတော့ Stable ဖြစ်တဲ့ Ubuntu Natty(11.04) ဖြစ်ပါတယ်။
What fonts we will use?
ဘာ ဖွန့် (Fonts) သုံးမလဲ။ အဲဒါကတော့ မြန်မာမှာ အဓိက ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စကြီးတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော် သုံးဖို့အကြံပေးချင်တာကတော့ Keymagic ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို သွင်းရင် တခြား Install သွင်းထားပြီးသား ဖွန့်တွေကို ဖြုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်မလား၊ ဇော်ဂျီ-ယူနီ နဲ့ရိုက်မလားစသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ ဇော်ဂျီ-ယူနီ နဲ့ရိုက်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ရင်ရောမရဘူးလား လို့မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ လိုက်ပြောင်းပေးရပါလိမ့်မယ်။ ကူညီချင်လို့ ဇော်ဂျီနဲ့ပဲရိုက်ပေးပါ့မယ်ဆို
ရင်တော့ ရိုက်ပေးပါ လို့မေတ္တာရပ်ခံပါ့ရစေ။
To Download Keymagic
The words had reached limitation. So Pls read more in the following link. Thanks